भारतीय मुलका विज्ञ भन्छन्ः नेपाल काश्मिर होइन, मोदीले उन्माद शक्ति देखाउन खोजे
एजेन्सी । पछिल्लो समय नेपाल भारतको सिमा विवादका कारण दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता पैदा भएको छ । यो समस्या बेलाबेला उठ्ने गरेता पनि त्यति महत्व पाएको थिएन । तर, भारतले एकतर्फी रुपमा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा अतिक्रमण गर्दै सडक खनेपछि यो विवाद चुलिएको हो ।
नेपाल भारत विवाद चुलिएकै बेला भारतका भारतका एक प्राध्यापकले भारत नै यो विवादको प्रमुख कारण भएको बताएका छन् । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले उक्त नक्सा नमान्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
भारतीय प्राध्यापक अशोक स्वैनले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर भारतले विरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा यस विषयलाई ‘नक्सा युद्ध’को संज्ञा दिएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्‍यो। भारतले स्वीकार गर्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन। यो ‘नक्सा युद्ध’ कसले सुरु गर्‍यो ? किन भारतले नोभेम्बर २०१९ मा एकतर्फी रुपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा ल्यायो ? यो मोदीद्वारा शक्तिको उन्मादमा कश्मिरको नयाँ नक्सा पुनःतयार गर्नका लागि थियो। तर नेपाल कश्मिर होइन।’
भारतीय प्राध्यापक अशोक स्वैन स्वीडेनको उप्साला विश्वविद्यालयमा शान्ति र द्वन्द्व अनुसन्धान विषयका प्राध्यापक हुन्।